Afaka mampiditra kolotsaina vahiny isika ,satria tsy misy na iray aza eto an-tany kolotsaina "madio", kanefa mila fototra matanjaka sy tsara petraka izany.
Efa telo-polo taona no nipetrahako taty Frantsa. Na inona na inona ezaka nataoko hiaina amin’ny fomba vazaha, hatramin’izao mbola petaka ny oroko ary mbola bronzé ny fihodirako. Mirindra ny fiainako eo amin’ny mpiara-monina sy ny mpiara-miasa, saingy mbola sarotra amin-drizareo vazaha foana ny manonona ny anarako ary mora amin’ny kokoa ny manonona ny anaram-bazaha frantsay-poloney hoe "Czrdensky" ...
Ny fifandeferana tsy hoe omeo famotsoran-keloka ny mpanao herisetra sy mpanagadra fahatany sy mpamono olona sy mpandroba ny harem-pirenena sy volam-bahoaka. Tsia, ny fifandeferana dia miorina amin’ny fampanjakana ny rariny sy ny hitsiny. Fisaka ny rariny ... kanefa tsy maintsy karohina fa tsy ketsaketsaina fotsiny, tsy "compromission" velively. Izay mandika lalàna dia tokony iharan’ny sazy mifandraika. Misy fetra ary misy aro-fanina ny fifandeferana : fandavana sy fandavoana ny tsy rariny.
"Obtenir un accord commun est une bonne chose, mais l’essentiel est l’effort de chacun d’écouter les autres et d’essayer de comprendre leurs points de vue". Ny fifandeferana dia natao hampirindra ary eo vao mitombina ny marimaritra iraisana : mahay mandefitra aho rehetfa tsy lany ny hevitro.
" complexe post-colonial : l’ex-colonisé, qui a toujours cru qu’il est inférieur, de par ses origines et sa culture : en somme, un colonisé dans l’esprit. C’est donc un sentiment d’infériorité pour celui qui a été colonisé et qui a transmis inconsciemment ses inhibitions à sa descendance. Et ce, à cause du sentiment de supériorité de celui qui a colonisé."